Global Aawaj | » राजा फालियो भन्दैमा पृथ्वीनारायण शाहलाई हेलागर्ने अधिकार कसले दियो ? राजा फालियो भन्दैमा पृथ्वीनारायण शाहलाई हेलागर्ने अधिकार कसले दियो ? – Global Aawaj
राजा फालियो भन्दैमा पृथ्वीनारायण शाहलाई हेलागर्ने अधिकार कसले दियो ?
राजा फालियो भन्दैमा पृथ्वीनारायण शाह लाई हेलाँ गर्ने अधिकार कसले दियो ? के हामी हाम्रा बाउआमा बिना यो धर्तीका हुने थियौं ? एक पटक सोचौं सबैले हो । त्यस्तै उहाँ बिनाको नेपाल कल्पना पनि गर्न सकिन्न। सबै भन्दा बढी राष्ट्रहितको कुरा गर्नेहरू सबैभन्दा चर्को रूपमा विदेशी दलाल भएका छन् । दुनियाँलाई गरेर देखाएपछि प्रशंसा नपाउने कुरै छैन। तर दुनियाँलाई गरेर देखाउन त पहिले आफूमा गुण चाहिन्छ । गुण नै नभएको व्यक्ति जतिसुकै पद वा ओहदामा पुगे पनि हुनेवाला केही छैन। लाग्छ आज स्यालहरुले मासु लुछाचुडी गरीरहेछन् । यस्ता स्यालहरु स्वामीभक्त भएर देखा पर्छन।